‘फर्स्ट लेडी’ डाक्टर आरजु राणालाई चिट्ठी « Image Khabar
‘फर्स्ट लेडी’ डाक्टर आरजु राणालाई चिट्ठी
Imagekhabar १२ श्रावण २०७८, मंगलवार ०९:२१
आदरणीय आरजु म्याम,
आराम छु सोही चाहन्छु ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर राजनीतिक रूपमा जति भाग्यशाली हुनुहुन्छ त्यति नै भाग्यमानी मान्छे तपाईं पनि हो । शेर बहादुर देउवाको राजनीतिक कर्मले हो या तपाईंको भाग्यको बलले हो तपाईंहरु दुवैलाई भाग्यमानी मान्छेहरुको श्रेणीमा राखेर मान्छेहरुले बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने गर्छन् । भाग्य र कर्मको परिपुरक तपाईंहरु पति पत्नी हुनुहुन्छ भन्दा अन्यथा नहोला ।
आजको मेरो सरोकार तपाईंको भाग्यको थोरै हिस्सा मात्रै पनि देशको भाग्यको हिस्सा बनोस् बन्नुपर्छ र त्यो बनाउने ठाँउलाई प्रभाव पार्ने तपाईंको हैसियत छ भनेर सम्झाउने धृष्टता गरेको छु । मनोविज्ञानमा विध्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुनुको अर्थमा जनताको मनोवैज्ञानिक पक्ष र राजनीतिको मनोविज्ञान मलाई भन्दा यहाँलाई धेरै छ तसर्थ म त्यता जान्न । तर विषय विज्ञमा पारंगत मान्छेले पनि आ आफ्नो क्षेत्र बारे उदासिन रहेको र आफ्नो ज्ञानको क्षेत्र भन्दा बाहीर बसेर गर्नु पर्ने काम नगरी नगर्नु पर्ने काम गरेकोमा आम मान्छे जत्तिकै म पनि भलिभाँती जानकार छु । मेरो गुनासो पनि यही हो । फर्स्ट लेडी भएर यहाँले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु भएन र जे नगर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु भयो । यसर्थ तपाईंलाई केही कुरा स्मरण गराउन चाहेको हुँ ।
पन्चायत हुँदा अत्यन्तै लोभलाग्दो राजनीतिक भविष्य लिएर जेल नेल र अनेक कष्ट खपेर राजनीतिको आकर्षण बनेका तपाईंका श्रीमान देउवा गृहमन्त्री बन्ने बेला सम्म २०४८ ताका सुदुरपश्चिम र नेपालकै गणनायोग्य नेता हुनुहुन्थ्यो भने काङ्ग्रेस राजनीतिमा देउवाको क्रेज आसा लाग्दो थियो । डडेलधुराको सामान्य परिवारबाट राजनीतिको भट्टीमा खारिएका देउवा सबैका प्रिय र सरल थिए । सबैसँग राम्रो पहुँच बनाएका देउवा आम कार्यकर्ताका रोजाइका पात्र थिए । २५ वर्षको उमेरमा नेपाल विद्यार्थी संघ जसलाई कांग्रेसको नर्सरी भनेर चिनिन्छ त्यो संस्थाको अध्यक्ष भएका देउवा आम विद्यार्थी र राजनीतिका चिरपरिचित पात्रका रूपमा देश बिदेशमा चिनिएका नेता थिए । सुनिन्थ्यो दसैंको आशिर्वाद दिँदा देउवा जस्तो भएस भनेर टीका लगाइदिने गरिन्थ्यो रे । त्यस्ता राजनीतिक कर्मीको पत्नी भएर जानू यहाँको अर्को सौभाग्य हो । राणा खान्दानको भएर पनि सामान्य कुलका ग्रामीण परिवेशका एक राजनीतिज्ञलाई ‘वर’ स्वीकार गर्नु यहाँको उदार सोच र छविको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । आफ्नो लगन गाँठाे देउवासँग कस्न लमीको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकप्रति देउवा दम्पती पक्कै आभारी छ । जुन संयोगले देउवा दम्पतीलाई थुप्रैपटक अनेकौं सुनौला अवसरले चुम्यो । देउवाको राजनीतिक ग्रुमिङमा यहाँको योगदान नभए पनि उनको राजनीतिक सफलताको फलाहार मज्जाले ग्रहण गर्न पाउनु त्यो एक पटक मात्रै नभएर पाँच पाँच पटक त प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउनु निस्चय नै असामान्य घटना हुन ।
सत्ता आरोहण आफैमा महत्त्वपूर्ण त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला यसले देश र दुनियाँको लागि गर्व गर्ने र छाती चौडा पार्ने कामको श्रीगणेश गर्द्छ । अन्यथा एउटा व्यक्ति जति पटक सत्तामा पुगे पनि त्यो उसको नितान्त व्यक्तिगत उपलब्धि भन्दा पर हुन सक्तैन । वी पी थोरै समय सत्तामा बसे , पुस्प लाला सत्तामा कहिल्यै पुगेनन्, गणेशमानले सत्तालाई महत्त्व दिएनन तर जनताको मनमा यी नेताहरु सदैव छ्न त्यसैले सत्तामा कति चोटि पुगे भन्दा नी सत्तामा पुगेर के गरे त्यो अहम सवाल हो । सुनिदै छ देउवाको सात पटक प्रधानमन्त्री हुने भावीको लेखोट छ रे ? आज सम्म देउवा सत्तामा पुगेपछि वा भनिने र तुलना योग्य कुनै पनि काम विशेष रूपमा सम्पन्न गर्न नसकेको देख्दा यो खुसी तपाई र केही सिमित मान्छेको घेरा भन्दा देसको लागि हुन र बन्न सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी समेत यो खुशीमा समग्र पार्टी रमाउने वातावरण बनेको देखिन्न । अत देउवा सात पटक प्रधानमन्त्री बन्दा रमाउने अवसर किन भएन र बनेन ? कर्म भाग्य या परिस्थितिको घन चक्कर जे भए पनि बारम्बार प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति बन्ने तर उनको व्यक्तिगत सत्तारोहणमा पार्टी पनि खुसी देखिन नसक्ने कस्तो बिडम्बना र परिस्थिति या नियति के हो नेपालीहरुको ? यसको उत्तर राणा म्यामसँग हुनुपर्छ, छ ।
देउवाको पुर्पूरोमा घाम लाग्दा आम नेपालीको भविस्य किन अन्धकार र धमिलो बन्छ ? शायद यसको उत्तर समयले पनि दिन्छ होला ? इतिहासले पनि मुल्यांकनको तुलो जोखेको हुनुपर्छ । बस प्रतीक्षा गर्नु छ । मेरो लागि अनौठो र आश्चर्य लाग्ने विषय यही हो । सर्वाधिक आलोचना पाएका र संसदीय वयवस्थामा विकृति भित्र्याउने संसदीय मर्यदा कायम गर्न नसक्ने , प्रजातन्त्र राजालाई बुझाउने, काङ्ग्रेसलाई पराजित बनाउन मात्रै सफल जस्ता विशेषण र विशेषता पाएका देउवाको अपरिहार्यता आजको राजनीतिक वृत्तमा पनि किन ? दुई तिहाई बहुमत भएको पार्टी सरकार ढाल्नु र १७५ संसदीय क्षेत्रमा मुश्किलले २३ ठाँउ जित्ने पार्टीका सभापति संसदीय गणितमा जेठो देखिनु, र त्यसको निर्विकल्प पात्र देउवा रहनु आदि यावत कुराको राजनीति शास्त्रीय र समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ? नेपाली राजनीतिमा यो एक गज्जब खोजको विषय हो । मेरा यी प्रश्नहरुको जबाफ तपाईंबाट किन पनि अपेक्षित छ भने तपाईं देउवाको हर राजनीतिक कदमको साक्षी र भोक्ता अनि देउवालाई हस्तक्षेप गर्ने ल्याकत राखेर बसेको जीवन सँगीनी हुनुहुन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेताकार्यकर्ता भन्छन् आर्जु भाउजुको आगमन देउवाको जीवनमा भए देखि सिमित काङ्ग्रेसजनको लागि देउवा महलको ढोका फराकिलो र आम काङ्ग्रेसको लागि साँघुरो भयो । समाजवादी जीवन शैलीका देउवा एकाएक राजा र राणा अर्थात बाबू साहेब देखिन थाले । समाजवादी शैलीका सुकिला देउवा राणा साहेब , राजा साहेब र साही काङ्ग्रेसको हिलो मैलोमा मुछिन पुगे । मैतिदेवी तिर कलेज लाईफमा हुँदा सामान्य भट्टीमा आफ्ना साथीहरू, काङ्ग्रेस कार्यकर्तासँग समाजवादी सोमरस पान गर्ने देउवा बिहे पछि कहिल्यै साधारण बन्न सकेनन । जिम्मेवारी र पदिय दायित्वले फरक हुनु एउटा कुरा तर राणा खान्दानको ज्वाइँ हुने बित्तिकै आफ्नो धरातल र भूमि बिर्सेर फरक बन्नुले काङ्ग्रेस कार्यकर्ता खिन्न छन् र यी सबको मुल कारण आरजु म्यामको शर्त, हैकम र बन्देज भनेर भन्छन् काङ्ग्रेस जन ।
देउवालाई देउवा हुन नदिएर राणा साहेब बनाएकोले देउवा पावर र पदमा रँहदा पनि काङ्ग्रेस उकालो लाग्न नसकेको धेरैको निस्कर्ष छ ।देउवालाई होइन अब देउवा पत्नीलाई नरिझाइ केही हुन्न भन्ने बुझाइ बोकेर काङ्ग्रेसहरु बसेका छन् र म्यामको नजिक हुन चाहन्छ्न जुन हाम्रो जस्तो समाजमा अस्वाभाविक पनि होइन ? फरियाको साइनोसँग काम सजिलो हुन्छ, झन यहाँ त श्रीमती नै पर्नु भयो र देउवालाई आफ्नो इशारामा नचाउने तागत राख्नु हुन्छ । शक्ति केन्द्र आफूलाई बनाएर देउवाको राजनीति र इतिहासलाई मैलो र धुलो पार्दै हुनुहुन्छ भनेर आरोपित गर्नेको शंकामा मल जल गर्ने कारण यथेष्ट छन् । पार्टीको निर्णय प्रक्रिया देखि मन्त्री छान्ने, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति बाँडने र उच्च पद्स्त कर्मचारीको सरुवा देखि अन्य उठाैती पुठाैति सम्ममा विगत देखि नै यहाँको नाम मुछिएको छ । के यी सब भ्रम र लान्छना मात्रै हुन ? यतिबेला यी सब कुराको स्पस्टिकरण कामले दिने मौका जुरेको छ ।
विगतमा भए गरेका गलत कामको नजिर इरेज गरेर नयाँ इतिहास लेख्ने सुवर्ण मौका जुटेकाे छ । तर दुखको कुरा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा यहाँका व्यावसायिक साझेदार र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ब्यापार बनाएका एक व्यापारी सांसद रोजेर यहाँ र यहाँका श्रीमानले ‘ब्लन्डर’ गर्नु भएको छ । नेपाली जनताले देउवा सरकारले पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा हालिदिएको टिप्पणी गरेका छ्न । के उमेस श्रेष्ठ भन्दा काबिल र पार्टी राजनीतिमा ख्याती प्राप्त अरु संसद सदस्य काङ्ग्रेससँग थिएनन् ? काङ्ग्रेस जनको चरम असन्तुष्टि र आक्रोश गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीमा डाेबाटे विश्वकर्माको अस्विकार र केन्द्रमा उमेश श्रेष्ठको प्रतिस्थापनले देखाएको छ । एकातिर दलितको अपमान गरिएको कुरा छ भने अर्कोतिर ब्यापार नै शिक्षा र स्वास्थ्यको गर्नेलाई स्वार्थ बाझिने तालुदार मन्त्रालयको राज्यमन्त्री ?
नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको कार्य सम्पादन क्षमता बारे प्रश्न गरिहाल्नु हतार होला । तर देउवाले आफू कता जाने र कसको सेवा गर्ने प्रष्ट संकेत दिएका छन् भनेर राजनीतिक पण्डितहरुले आफ्नो मत दर्ज गरिसके सो हेर्न सामाजिक सन्जाल चिहाउनुस म्याम । सिक्ने कि गल्ती दोहोर्याउने ? इतिहास बनाउने कि बनेको इतिहासमा कालो पोत्ने अर्थात नकारात्मकताको भारी मात्रै बोक्ने ? विधिशास्त्रको कुरामा टेकेको भनेर नैतिकता मर्यादा र लोक आवाज भुल्न मिल्दैन । ‘पिपुल भर्डिक्ट’ के छ सार्वजनिक सन्जाल चिहाए पुग्छ । आजको ‘डाइरेक्ट डिमोक्रेसी’ सामाजिक सन्जाल हो । अब कुन बाटो रोज्ने र पति पर्मेश्वरलाई कस्तो सल्लाह दिने यहाँको मर्जी ?
जनता के चाह्न्छ्न र जनताको अपेक्षा कस्तो हुन्छ विचार गर्नु भएकै होला ? गत निर्वाचनमा कैलालीबाट तपाईंले चुनाव हार्ने कसैको कल्पना थिएन काङ्ग्रेसको लागि सबैभन्दा सुरक्षित स्थानको रिपोर्ट सुरक्षा निकायसँग लिएर तपाईं त्यहाँबाट चुनाव लडन जानू भएको थियो । स्थानीय बासिन्दा नभएको विपक्षीको चुनावी आरोप चिर्न यहाँले दुई करोडमा घर किनेर आफूलाई स्थानीय देखाउन जुन प्रयत्न गर्नु भयो त्यो प्रत्युत्पादक भएको तथ्य भुल्नु भएको छैन जसको कारण नारदमुनी राना सँग पाँच हजार मत कमको फरकमा चुनाव हार्नु पर्यो । तपाईंको ठाँउमा कुनै अरु काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले टिकट पाएको भए आज शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा एक भोट थपिएर १६६ हुन्थ्यो । तर तपाईंले घर किनेर पैसाको रबाफ देखाएको कारण काङ्ग्रेसले आफ्नो सिट गुमाउनु पर्यो ।
डाक्टर साब , तपाईं राम्रो पढाई लेखाइ भएको मान्छे र समाज सेवाको माध्यमबाट आउनु भएको व्यक्ति । तपाईंबाट देशले राम्रो अपेक्षा गर्नु के बेठिक हो र ? देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पत्नी जसले देश हाँक्ने पात्रलाई उचित सल्लाह र उचित निर्णय गर्न लगाएर आफ्नो र पतिको अनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको छवि उजिल्याउने मौका पाउनु भएको छ । कृपया म यो निवेदन गर्छु कि सकिन्छ राम्रो र दूर्गागामी कर्म गर्न लगाएर देउवालाई इतिहासमा हैसियत बढाउने काममा सहयोग गर्नुस् । पार्टी पद्धति र प्रणालीबाट चल्न देउवालाई दवाव दिनुस सकिन्न चुप लागेर बस्नुस जस्तो प्रथम महिला भएर पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिका शाक्य कहिँ कतै विवादमा पर्नु भएन । ओली वाण नै वाणको बिछ्यउनामा सुत्नु परे पनि राधिका शाक्यलाई अवहेलना र लान्छनाको कुनै लेस बोक्नु परेन । त्यति गर्न सकिन्न भने राजकीय मामिलामा हस्तक्षेप गरेर देउवाको होस्ल्याङे पाराको फाइदा उठाउने कार्य किमार्थ नगर्नुस् । सर्वसाधारणको छोरो देउवाले कमाएको प्रसिद्धि र कर्मलाई जिवन्त बनाउन यत्न गर्नुस । देउवालाई गलत पथ हिंड्न् रोक्न सक्नु भएन भने तपाईंको आफ्नो राजनीतिक सपना र छोराको समेत भविस्यको राजनीति सखाप बन्ने छ ।
कृपया म्याम महिलासँग रहेको पुरुष पगाल्ने प्रकृति पद्धत क्षमतालाई रचनात्मक बनाएर देसको भविस्य र भाग्य बदल्ने अवसरमा परिणत गर्न समय लगाउनुहोस् । प्रथम लेडीकाे रूपमा मात्रै होइन एक देश भक्त महिलाको दर्जामा राखेर मान्छेहरुले सम्मान पूर्वक स्यालुट गर्नेछन् । देउवालाई राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ का फोटाे होइन काङ्ग्रेस नेताहरु बीपी, गणेशमान र कृष्ण प्रसादको फोटाे हेर्न र तिनको आशिर्वाद पाउने काम गर्न सम्झाउनुस् । इतिहास हेरेर वर्तमानलाई अन्याय गर्न उनले सक्ने छैनन् । पतिलाई गर्नुपर्ने रेख देख स्याहार सुसार औसधि, खानपिन व्यवस्था अनुशासन सिकाएर उनको स्वास्थ्यको ख्याल राखेर जसरी देउवाको जीवन शैली परिवर्तन र सहज बनाउन यहाँले ध्यान दिनु भएको छ त्यसरी नै उनीबाट हुने कार्य, राज्य सन्चालन, सम्पादनलाई ब्यबहारिक जन आकांक्षा मुताबिक बन्न र देस व्यवस्थित रुपले चल्न पनि यहाँले आफ्नो क्षमताको भरमग्दुर प्रयत्न गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै बिदा माग्छु ।
एक रैती संजिव कार्की
सरकार हराएको सूचना…
नन्दप्रसादहरुको प्रेतको घेरामा परेको राज्यसत्ता र देउवा–दाहाललाई प्रश्न–अधिकारी दम्पत्तिसहितका पीडितलाई न्याय कहिले ?
पुरस्कार नलिनु झन् पुरस्कार !